Kristianina mitondra vokatra
« Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ ny vokatrareo, mba homen’ ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ ny anarako na inona na inona. » ( Jaona 15 : 16)
« Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy latsaka ao amin’ ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy; fa raha maty kosa izy, dia hahavokatra be. » ( Jaona 12 :24)
Manantena vokatra amintsika Jesosy, misy zavatra andrasan’Andriamanitra amintsika
« Ka dia hoy izy tamin’ ny mpamboatra ny tanimboaloboka; Indro, efa telo taona izay aho no tonga nitady voa tamin’ ity aviavy ity, fa tsy nahita; kapao io; nahoana io no manimba ny tany?Fa ny mpamboatra namaly ka nanao taminy hoe: Tompoko, avelao ihany izy amin’ ity taona ity mandra-pihadiko manodidina azy, ka hasiako zezika;9 angamba mbola hamoa izy; fa raha tsy izany, dia hokapainao ihany. » (Lioka 13 :7-9)
« Ary nahita hazo aviavy [aviavimbazaha] anankiray teo amoron-dalana Izy, dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy, afa-tsy ravina ihany; dia hoy Izy taminy: Aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. » (Matio 21 :19)
Nanantena vokatra Jesosy, fa rehefa tonga Izy dia tsy nahita na inona na inona, rehefa tsy nahita Izy dia niteny hoe : « kapao ireo », izany hoe rehefa tsy mamokatra izany ny olona dia esorin’Andriamanitra. Eo amin’ny Tompo tsy mba misy fotoana, na dia vao manomboka aza hianao dia mila vokatra ny Tompo, tsy misy taom-pamokarana fa isan’andro isan’andro dia mila mamokatra.
Misy tanjona kendren’Andriamanitra eo amin’ny olona rehefa mivavaka izy. Indraindray mantsy diso fanantenana ihany hoe mivavaka izy satria manana olana, na misy zavatra tiany ho azo.
Tandremo sao diso tanjona hianao. Ny zavatra tena kendren’Andriamanitra ho anao dia ny hanova tanteraka ny fiainanao, ho afaka tanteraka amin’ny fahotanao hianao, hahatonga anao ho olom-baovao mba hiarahanao mipetraka amin’i Jesosy rehefa rahatrizay.
« Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin’ ny seza fiandrianako.» (Apokalypsy 3 :21)
Adinoy daholo ny zavatra rehetra izay nahatonga anao hivavaka, fa ny tena zava-dehibe dia ny hahatonga anao ho olom-baovao.
Rehefa tena tafiditra hianao amin’ilay tena atao hoe fanjakan’Andriamanitra, dia hianao aloha no tiany omeny izany vokatra izany.
« Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana,23 fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany. » (Galatiana 5 :22-23)
Vokatry ny Fanahy :
« Koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana hianareo. » (Matio 3 :8)
Ny olona rehefa tena nandray an’i Jesosy marina dia miara-maty amin’i Kristy izy mba hiara-mitsangana aminy ho olom-baovao. Efa lasa ny zavatra teo aloha, tsy maintsy maty hianao vao misy vokatra. Diniho ny tenanao hoe efa tena niara-maty tamin’i Kristy ve hianao sa hianao taloha ihany no mbola velona ?
Mila fanapahan-kevitra izany, tsy resaka fombafomba fivavahana izany. Mila mitondra voa miendrika ny fibebahana marina hianao.
« Ary raha niara-maty tamin’ i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika» (Romana 6 :8)
Maty ilay maha nofo anao fa velona aram-panahy, madio fomba fisainana, madio fomba fijery, madio fitondran-tena. Rehefa niara-maty taminy hianao dia hiara-mitsangana aminy ihany koa, dia izay vao mitondra vokatra.